အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးအကြောင်း (Hepatitis B) ~ SAI SENG SERK
Home » HEALTH » အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးအကြောင်း (Hepatitis B)
အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးအကြောင်းကို တော်တော်များများကြားဖူးပြီးလောက်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အတော်လေးကို ဒုက္ခပေးလာတဲ့ ရောဂါပိုးပါ။ တစ်ဦးကတစ်ဦးကူးစက်နှုန်းအရမ်းများပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံလောက် ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နာမည်လောက်ကိုပဲကြားဖူးနေကြပြီး သေသေချာချာရေရေလည်လည်သိပ်မသိကြသေးတဲ့အတွက် ဖတ်ဖူးမိသလောက်လေး ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီရောဂါပိုးပာာ တကမ္ဘာလုံး အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ရောဂါပိုးပါ။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၃ပုံ၁ပုံပာာ ကူးစက်ခံကြရပြီး လူသန်းပေါင်း ၃၅၀လောက်ပာာ တစ်သက်လုံးဒီရောဂါပိုးနဲ့နေထိုင်သွားရပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးပာာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ အသည်းခြောက်ခြင်းနဲ့ အသည်းကင်ဆာရောဂါတို့ကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Antiviral ဆေးဝါများနဲ့ ဘီပိုးကိုကုသလို့ရနေပါပြီ။ ဘီပိုးကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ အသည်းအစားထိုးကုသနည်းကသာ အသက်ရှင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုးပာာ hepadnavirus ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ပိုးအများစုပာာ အပြင်မှာသိပ်မနေနိုင်ပေမယ့် ဒီဘီပိုးကတော့ အတော်လေးကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ဘီပိုးပာာ -20 C မှာဆိုရင် ၁၅နှစ်နေနိုင်ပြီး -80 C မှာဆိုရင် ၂နှစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အပြင်အပူချိန်နဲ့ဆိုရင် ၆လထိနေနိုင်ပြီး 44 C မှာဆိုရင်တော့ ၇ရက်နေနိုင်ပါတယ်။ (C ဆိုတာတွေက ဆဲလ်စီးယပ်စ်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်) အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါပိုးတွေပာာ RNA virus တွေဖြစ်ကြပေမယ့် ဘီပိုးကတော့ DNA virus ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် အများအားဖြင့်သုံးတာကတော့ HBsAg ကိုပဲစစ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘီပိုးရဲ့ အပြင်နံရံမှာဖုံးအုပ်ထားတာပါ။ အဲလိုစစ်လို့ HBsAg reactive ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ HBeAg ကိုစစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ဘီပိုးရဲ့အတွင်းအလယ်ဗပိာုမှာရှိတာပါ။ HBsAg reactive ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာက ဘီပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုပဲပြပါတယ်။ HBeAg positive ဆိုတာကတော့ ဘီပိုးပာာပွားနေတယ်ဆိုတာကိုပြပါတယ်။
ဘီပိုးပာာ လူတစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများနဲ့ကူးစက်ပါတယ်။
1. Sexual (လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်း။ အဓိကကူးစက်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူ၊ လိင်ကွဲ အကုန်လုံး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။)
2. Percutaneous (ဆေးထိုးအပ်မျှဝေသုံးစွဲတဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် ဆေးသမားတွေ၊ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတဲ့သူတွေ၊ ဘလိတ်ဓါး သွားပွတ်တံစသည်တို့ကို မျှဝေသုံးစွဲတဲ့သူတွေ၊)
3. Perinatal (မိခင်မှကလေးသို့ ကူးစက်ခြင်း၊ ရိုးရိုးမွေးတာရော၊ ခွဲမွေးတာရော ကူးစက်နှုန်းတူညီပါတယ်။ မကွာခြားပါဘူး။ မိခင်မှကလေးသို့ကူးစက်နှုန်းပာာ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွေးမွေးခြင်းကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရင်တော့ ရောဂါပိုးကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။)
4. Horizontal (ဘီပိုးပာာ ခန္ဒာကိုအပြင်ဘက်မှာ အချိန်အကြာကြီးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကို ကြားခံပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးတွေဆိုရင် အရုပ်ကနေတဆင့်တောင်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ မသိသာတဲ့အနာလေးတွေကနေလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တောင်ဖြစ်နေမှန်းမသိတဲ့အနာကနေတဆင့် ဘီပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။)
5. Transfusion (သွေးသွင်းခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့သွေးအလှူရှင်တွေကို ဘီပိုးရှိမရှိပါ ထည့်စစ်တဲ့အတွက် သွေးသွင်းတာကနေတဆင့်ကူးစက်တာကတော့ အတော်လေးလျော့နည်းသွားပါတယ်။)
6. Nosocomial infection (လူနာကနေ ဆေးဝန်ထမ်း၊ ဆေးဝန်ထမ်းကနေလူနာ အပြန်အလှန်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ အပ်စူးရာကနေကူးစက်ပါတယ်။)
7. Organ transplantation (ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသရာမှတဆင့်ကူးစက်ခြင်း)
ဘီပိုးပာာ ကနေဒါ၊ အနောက်ဥရောပ၊ သြစတေးလျ၊ နယူးဇီလန် စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနှုန်းအရမ်းနည်းပါတယ်။ ဂျပန်၊ တောင်အမေရိက၊ မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၊ ဗပိာုအာရှဒေသတွေမှာတော့ အလယ်အလတ်ဖြစ်ပွားနှုန်းရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှ၊ အာဖရိက၊ တရုတ်၊ အင်ဒိုစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဖြစ်ပွားနှုန်းအလွန်မြင့်ပါတယ်။ (မကောင်းတာဆိုလို့ကတော့ အဲဒီ အရှေ့တောင်အာရှက ထိပ်ဆုံးကြီးပဲ။) လူမည်းတွေမှာပိုပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမဆိုရင် ယောက်ျားတွေမှာပိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Acute phase။ ။ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ၁လကနေ ၆လအတွင်းမှာဖြစ်ပွားပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့သူတွေမှာတော့
မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ညောင်းညာကိုက်ခဲပြီး မလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်သွားခြင်း၊ ၀မ်းဗိုက်ညာဘက် အထက်နားတွင်အောင့်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီပိုးပာာ ရောဂါကူးစက်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲလိုမျိုး သာမန်ဖျားနာတာနဲ့ သိပ်မသဲကွဲတဲ့လက္ခဏာတွေပြတတ်သလို ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိပါတယ်။ သတိလစ်မေ့မြောသွားတာ၊ Hepatic encephalopathy လို့ခေါ်တဲ့အူကြောင်ကြောင်သတိမရှိတာတွေ၊ အိပ်စက်တဲ့ပုံစံပျက်သွားတာ စတာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အသည်းကောင်းမကောင်းစစ်တဲ့ ALT, AST စတာတွေကိုစစ်ကြည့်ရင် တက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိ့မ်မယ်။ ဘီပိုးပာာ ကူးစက်ခံရတဲ့သူတိုင်းမှာ တစ်သက်လုံးရောဂါမပျောက်တော့ဘဲရှိသွားတာမပာုတ်ပါဘူး။ ဘီပိုးလူတစ်ယောက်ကိုကူးစက်ခံရပြီး ပျောက်မပျောက်ဆိုတာပာာ အဲဒီလူကူးစက်ခံရတဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်မှာကူးစက်ခံရလေ ပျောက်ကင်းနိုင်ချေနည်းလေဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမှာ ဘီပိုးကူးစက်ခံရရင် နာတာရှည်ဖြစ်ဖို့က ၁၀၀မှာ ၅ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ အမကနေကလေးကိုကူးစက်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ နာတာရှည်ဖြစ်ဖို့ ၁၀၀မှာ ၉၀လောက်ရှိပြီး အသက် ၁နှစ်ကနေ ၅နှစ်ကြားမှာကူးစက်ခံခဲ့ရရင်တော့ နာတာရှည်ဖြစ်ဖို့ ၁၀၀မှာ ၂၀ကနေ ၅၀ထိရှိပါတယ်။ ဘီပိုးကူးစက်ခံရသူတွေမှာ အပြင်းအထန်အသည်းရောင်ပြီး သေလောက်အောင်ဖြစ်တာကတော့ အတော်လေးကိုရှားပါတယ်။
Chronic phase။ ။ဘီပိုးကူးစက်ခံရပြီး သူ့အလိုလိုပျောက်ကင်းမသွားဘူးဆိုရင်တော့ နာတာရှည် (Chronic phase) ကိုဝင်သွားပါတယ်။ နာတာရှည်ဘီပိုးရှိသူတွေမှာ အများအားဖြင့်တော့ ရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်တွေမှာရောဂါလက္ခဏာပြလာတာလဲဆိုတော့ အသည်းတဖြည်းဖြည်းပျက်ဆီးလာပြီး အသည်းခြောက်လာရင် ရောဂါလက္ခဏာတွေစပြလာပါတယ်။ အသည်းပျက်ဆီးလာပြီး အသည်းခြောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဘေလုံးကြီးလာတာ၊ ရေဖြဉ်းစွဲလာတာ၊ ဖောလာတာ၊ ခန္ဒာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြားမှာ အနီစက်တွေဖြစ်လာတာ၊ ဝှေးစေ့သေးသွားတာ၊ အသားဝါလာတာ၊ ရင်သားတွေစူထွက်လာတာ စတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာသွေးစစ်ကြည့်ရင် ALT ကပုံမှန်ထက် အဆ၅၀လောက်တက်နေတတ်ပါတယ်။ Chronic phase ကိုရောက်သွားတဲ့လူတိုင်းပာာ ဒီလိုမျိုးအသည်းခြောက်တာတွေ၊ အသည်းကင်ဆာဖြစ်တာတွေ ဖြစ်တာမပာုတ်ပါဘူး။ ဘီပိုးနာတာရှည်ရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်အသည်းခြောက်မခြောက်ဆိုတာက ပိုးပွားတဲ့နှုန်းတွေ၊ ခန္ဒာကိုယ်ကတုံ့ပြန်ပုံတွေ၊ အသက်အရွယ်၊ လိင်၊ တခြားအသည်းကိုပျက်ဆီးစေတဲ့အပြုအမူတွေ ဥပမာ အရက်သောက်သုံးခြင်း စတာတွေရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ Chronic phase ထဲကိုဝင်သွားတဲ့သူတွေမှာလည်း ဘီပိုးလုံးဝပျောက်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကိုနည်းလွန်းပါတယ်။
နာတာရှည်ဘီပိုးရှိသူတွေမှာ အသည်းခြောက်မခြောက်ဆိုတာပာာ အောက်ပါအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။
၁။ပိုးပွားနှုန်း (ပိုးပွားနှုန်းမြင့်နေတဲ့သူတွေ အသည်းခြောက်ဖို့ပိုမြန်ပါတယ်။ ပိုးပွားနေမနေကို သိနိုင်တာက HBeAg ကိုစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ HBeAg positive ဖြစ်နေရင် ပိုးပွားနေတာကိုပြပါတယ်။)
၂။အရက်သောက်သုံးခြင်း (အရက်သောက်သုံးခြင်းပာာ ဘီပိုးရှိသူတွေမှာအသည်းခြောက်ဖို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။)
၃။စီပိုးပါတွဲရှိနေခြင်း။ (Hepatitis C coinfection)
၄။ဒီပိုးတွဲရှိနေခြင်း (Hepatitis D coinfection)
ဘီပိုးပာာ အရမ်းကူးစက်လွယ်လွယ်ပါတယ်။ သူရဲ့ကူးစက်နှုန်းက စီပိုးထက်ဆိုရင် ၁၀ဆ၊ HIV ပိုးထက်ဆိုရင် အဆ၁၀၀ပိုပြီးကူးစက်ပါတယ်။ ဥပမာ HIV ပိုးကူးစက်ဖို့ သွေးပမာဏ 1ml လိုမယ်ဆိုရင် ဘီပိုးကူးစက်ဖို့အတွက်သွေးပမာဏ 0.01ml သာလိုအပ်ပါတယ်။ အရမ်းကူးစက်လွယ်ပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် မကူးစက်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးကကာကွယ်ဆေးသာဖြစ်ပြီး ကူးစက်ပြီးတဲ့သူတွေမှာတော့ ဘာမှမထူးပါ။ ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးမယ်ဆိုရင် သုံးခါထိုးနှံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ကြိမ်၊ ပြီးရင် တစ်လအကြာမှာတစ်ကြိမ်နဲ့၊ ခြောက်လအကြာမှာတစ်ကြိမ်ထိုးနှံရပါတယ်။ ပြီးရင်ပြန်ပြီး Antibody စစ်ရပါတယ်။ မပေါ်သေးရင်ထပ်ထိုးရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားရင် ၅နှစ်ကနေ ၇နှစ်ထိခံပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ၅နှစ်ပြီးရင်ထပ်ထိုးရပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘီပိုးကိုကုသတဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘီပိုးရှိတဲ့သူတိုင်းပာာ ကုသမှုခံယူစရာမလိုပါ။ အောက်ပါအချက်တွေရှိတဲ့သူတွေသာ ကုသမှုခံယူစရာလိုပါတယ်။ HBV DNA level > 20,000IU/ml (10,000,00 copies/ml), ALT ၃လကနေ၆လထိတက်နေတဲ့သူတွေ၊ အထက်မှာဖြော်ပခဲ့တဲ့အသည်းရောဂါတွေခံစားနေရတဲ့သူတွေ။
အခုလောလောဆယ်မှာတော့ interferon alfa (IFN-a), lamivudine, telbivudine, adefovir, entecavir, and tenofovir စတဲ့ဆေးဝါးတွေရှိပါတယ်။ ကုသမှုပေးတဲ့သူပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဆေးသုံးစွဲတာလည်းကွာခြားပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး
ကွာခြားပါတယ်။ အသည်းခြောက်တာအရမ်းဆိုးရွားနေပြီဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အသည်းအစားထိုးခြင်းနည်းလမ်းနဲ့သာ အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။
အတိုချုံးပြီး အားလုံးကိုခြုံငုံမိအောင် တတ်နိုင်သလောက်ရေးလိုက်ပါတယ်။ မရှင်းတာ၊ နားမလည်တာ၊ ထပ်သိချင်တာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်။ ကျနော်မဖြေနိုင်ရင်လည်း ဖြေနိုင်မယ့်သူတွေကိုမေးပေးပါ့မယ်။